Vaovao - Inona no dingana amin'ny fanamboarana kitapo
Inona no dingan'ny fanamboarana kitapo fonosana
Ny kitapo dia na aiza na aiza eo amin'ny fiainantsika, safidio ny fomba karazana kitapo: ankehitriny ny karazana kitapo ampiasaina eny an-tsena amin'ny ankapobeny dia ny fivarotana lehibe antsoina hoekitapo akanjokitapo fiantsenana, ity karazana kitapo ity dia nomena anarana satria ny kitapo amin'ny tendrony roa amin'ny lamba dia toy ny akanjo.Misy ny famonosana sakafo antsoina hoe harona sakafo, mihinana sakafo maraina voatoto voatoto, mofo etona ity kitapo ity, ary mividy sakafo amin'ny fotoana entina handrafetana sakafo;Ny kitapo voankazo dia ampiasaina hitehirizana voankazo;Inona no ampiasain'ny toeram-pivarotana lehibe antsoina hoekitapo fiantsenana.Antsoina hoe paosin-drano ireo, izay mazàna lehibe kokoa;Avy eo dia misy harona fako, amin'ny ankapobeny mainty, tokantrano, finday ambongadiny tia mitazona finday.
Inona no dingana amin'ny fanamboarana kitapo fonosana?
1. Fividianana fitaovana, fitsofana sarimihetsika, fanontana, fanapahana, fonosana, fanaterana, mazava ho azy, ary fanangonana.
2.Fonosana kitapotsingerin'ny famokarana: amin'ny ankapobeny dia mila 3 andro ny manomana sy manamboatra takelaka, 5 andro hitsoka horonan-tsary ary 18 andro hanaovana kitapo, tombanana fa 4 andro eo ho eo ny famokarana vokatra, ary 30 andro eo ho eo ny famitana kabinetra kely.
3.3.Ny isan'ny fonosana harona: satria mitsoka sarimihetsika, fanontana mba hanandrana ny milina, ka avy ao amin'ny kitapo dia mety ho bebe kokoa noho ny mba habe dia mety ho kely, amin'ny ankapobeny araka ny fanao ny isan'ny fandoavam-bola.
Fotoana fandefasana: Apr-13-2022